हामी सबैलाई थाहा छ कि विवाहहरू र पार्टीहरू जस्ता घटनाहरू जहिले पनि तपाइँको सही समय फ्रेममा पर्दैन, विशेष गरी यदि तपाईं गर्भवती भएको बेलामा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ. जहाँ सम्भव छ, तथापि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको यात्रा तपाईंको गर्भावस्थाको सबैभन्दा आरामदायक अंशसँग मिल्छ. पहिलो त्रैमासिक अक्सर हुन्छ मतली संग ग्रस्त, भोकको अभाव र सामान्यतया डरलाग्दो महसुस हुन्छ, जुन गर्भवती भएको बेलामा यात्राको लागि नराम्रो खबर हो. तेस्रो त्रैमासिक तब हो जब तपाई एक ह्वेल जस्तै अलि महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ, र कुनै पनि अवधिको लागि उभिँदा तपाईंको खुट्टा खस्न चाहन्छ. सुगन्धित टाउको थप्नुहोस्, निद्रा को अभाव, र बढ्दो हुर्काएको बच्चाको आन्दोलन चक्र उसमा र यदि तपाईं गर्भवती भएको बेला यात्रा गर्नुभयो भने तपाईंलाई धेरै असजिलो यात्रा हुन सक्छ. दोस्रो त्रैमासिक प्रायः तपाईको यात्रामा उत्तम समय हुन्छ. तपाईं अझै ठूलो हुनुहुन्न, र धेरै जसो केसहरूमा, मतली कम भएको छ. गर्भवती भएको बेला यात्रा गर्नु उत्तम हुन्छ यदि तपाईं पूरै समय खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने, वा सुत्नुहोस्!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 गर्भवती हुँदा यात्राको लागि सल्लाहहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-pregnant%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
europetravel गर्भवती रेल यात्रा ट्राभलिंग प्रीपेग्नन्ट TravelPregnant traveltips